အဘယ်သူမျှမယာဉ်, Bombardier CL-415 အသံ
အဘယ်သူမျှမယာဉ်, Bombardier CL-415 အသံ 1 months ago5တစ်နှစ် #1360
ငါကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့် Bombardier CL-145 Canadair စူပါ Scooper installed ပါတယ်။ အရာအားလုံးအဘယ်သူမျှမ cockpit အသံ မှလွဲ. ... ဒဏ်ငွေပါ! ငါအတွက်လေယာဉ် load လိုက်တဲ့အခါ p3d4.4 ငါမက်ဆေ့ခ်ျကို "အီး get: \_P3D4 \_ gauge \_ cockpit ကျေးဇူးပြုပြီးဘာလုပ်ဖို့ "ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသံ?
အဘယ်သူမျှမယာဉ်, Bombardier CL-415 အသံ 1 months ago4တစ်နှစ် #1367
မဆိုအကူအညီတောင်းကျေးဇူးပြုပြီး? ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ Posted,